Iskena seXerox XD70N-U ADF - 600 dpi Optical ku- $ 1,307.75
Ikhaya I-icon phansi icon Best Ukuthengisela Imikhiqizo I-icon phansi icon Iskena seXerox XD70N-U ADF - 600 dpi Optical
Iskena seXerox XD70N-U ADF - 600 dpi Optical
IZIDINGO ZOMSEBENZI OWABIWE
Imvelo yanamuhla yomhlaba wonke kanye nabasebenzi ababonakalayo abakhulayo kusheshise ukuguqulwa kwedijithali. Abantu badinga ubuchwepheshe benethiwekhi obulula, obusheshayo, okwabelwana ngabo ukuqedela indawo yokusebenza engenamaphepha, ebonakalayo, nefu. Noma kunjalo izikena zendabuko ze-USB zidinga ukuxhumeka komuntu ngamunye kuya kwi-PC eyodwa. Ama-scanner-standalone scanner awanakho ukujula kwesoftware etholakala kuma-PC nakuma-laptops. Ama-MFP awavamile ukuhlolelwa izindlela zamaphepha ezinokwethenjelwa, amandla kanye nesivinini sezikena zamadokhumenti ezinikezelwe. Futhi ukuskena okukhiqizwayo okukodwa kanye nokugcina umlando kugudlulela emahhovisi asatshalaliswa ngisho nabasebenzi basekhaya.
IXerox® D70n Scanner yenzelwe umhlaba omusha womsebenzi. Ilungele izindawo zehhovisi ezidinga ubuchwepheshe benethiwekhi okwabiwe ngabo. Yakhelwe kungxenyekazi yehadiwe ne-elekthronikhi efakazelwe, isekela umjikelezo womsebenzi wansuku zonke ongaziwa kanye newaranti yomkhiqizi ojwayelekile ende. Isithwebuli esisheshayo somnyango esigabeni saso, futhi sisekela ukuskena kwabasebenzisi abaningi ngezindawo eziningi.
I-D70n Scanner isekela umjikelezo womsebenzi wansuku zonke wamakhasi ayi-15,000 ngosuku, kuze kufike ezikhathini ezi-3 eziphakeme kunama-scanner eminyango yokuncintisana. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuwina kwethu umklomelo we-reverse-roller, indlela yamaphepha amabili-motor ukuqeda isiminyaminya. Ukutholwa kwamashidi aphindwe kabili e-Ultrasonic kwakhiwe ngaphakathi. I-feeder yamaphepha ayi-100 ezenzakalelayo isekela amakhadi aqinile nobubanzi bephepha kuze kufike ephepheni elondliwe ngogandaganda. Isekelwa ngeWarranty yeminyaka emi-3 yoMkhiqizi Ojwayelekile. Lezi zici zidingekile ngokuphelele ukusekela ukuskena ngejubane elikhulu.
Ngokusheshisa okufika kumakhasi angama-90 ngomzuzu / izithombe eziyi-180 ngomzuzu, i-D70n isendaweni yesivinini sokukhiqiza. Leli zinga lokungena lingadala izingqinamba phakathi kokukhetha iphepha nefayela lokugcina lokuskena. Ukuqinisekisa ukuskena kweqiniso ngejubane eliphelele, sakhe indlela yokugcina yokuphela kwejubane. I-D70n ifaka iprosesa lesithombe elenziwa ngokwezifiso ukusingatha ubuchule obujwayelekile bokuskena kwihadiwe. Ukuxhumeka kwe-USB 3.1 Gen 1 noma kweGigabit Ethernet kunikela ngamapayipi wedatha abanzi, futhi iVisioneer's Acuity PC Optimization isebenzisa ukuqonda okuhle ukusebenzisa amandla wePC amaningi njengoba kutholakala ukuqedela ukucubungula isithombe sokugcina nokwakhiwa kwamafayela. Lezi zivinini zokuskena zisekela iphepha le-batch elisatshalalisiwe, igumbi lokuposa kanye nezindawo zokugcina umlando.
Ngokuxhumeka kwe-USB neNethiwekhi, abantu abaningi bangaxhuma nge-D70n Scanner ngasikhathi sinye kusuka kunoma iyiphi i-PC exhunywe kunethiwekhi, ngisho nabasebenzi abakude. IVatformeer Intelligent Software Platform iyatholakala kumsebenzisi ngamunye. IVisioneer OneTouch inikeza ukugeleza kokusebenza kweskena kwangokokuthinta inkinobho. IVisioneer Capture SE iphatha amaqoqo wokuskena ngokwezifiso nezici zokuskena ukuskena. Umbonisi TWAIN ™. Isoftware ephelele ye-ABBYY® FineReader Standard isingatha ukuhlelwa kwefayela le-OCR ne-PDF. Umsebenzisi ngamunye angakhetha eyodwa noma zonke zalezi zinhlelo ngokuya ngezidingo zabo.
Isheshisa ize ifike ku-90 ppm / 180 ipm ku-200 & 300 dpi *
Itreyi le-100-sheet le-ADF, ** indlela ebanzi yephepha
Umjikelezo womsebenzi wansuku zonke wamashidi ayi-15,000
Ukuxhumeka kwe-Gigabit Ethernet noma i-USB
Ukucutshungulwa kwesithombe esikwiBhodi
Imoto emibili, ukuguqula ubuchwepheshe be-roller
Ipulatifomu yeVisioneer Intelligent Software